China Aluminium Plastic Film mveliso kunye nabenzi | Yongjie
Ukusetyenziswa kweMveliso: Ipakethi yebhetri
Kukho uchungechunge olupheleleyo lwe-aluminium yokuqhubekeka ukusuka kwi-aluminium ingots ukuya kwiimveliso ezigqityiweyo, kwaye yonke inkqubo isuka kwi-aluminium ingots ukuya kwiimveliso ezigqityiweyo ilawulwa.
2.Kwinqanaba lokuqala lophuhliso lwefilimu yealuminium, kuye kwaveliswa inani elikhulu lokubanda, kwaye iimpawu ze-8021 alloy ziyaqondwa.
Iimveliso zefilimu zeAluminiyam-zeplastikhi zibandakanyiwe kuphuhliso lweemveliso ezintsha, kwaye babephethe izixhobo zorhwebo ezikhokelela kwamanye amazwe ezinje ngemiqolo yaseJamani neyaseSlovenia, amavili okusila angeniswe eJapan, kunye novavanyo lwepini oluvela eMzantsi Korea.
Ukuziqengqa okushushu-ukuqengqeleka okubandayo-ukuCoca-ukucoca-ukujija-ukukrola-ukusika -Ukupakisha
I-foil ye-aluminium ye-8021 yeyona nto iphambili esetyenzisiweyo kwipakethi yebhetri. Inokukhanya okuhle kunye nobungqina obunamandla bokufuma kunye namandla okuvimba. I-foil ye-aluminium engama-8021 ayinetyhefu kwaye ayinuki. I-alloy ye-aluminium ye-8021 isetyenziswa ngokubanzi njengezinto zokupakisha emva kokuphinda kwenziwe kwakhona, ukuprinta kunye nokuncamathelisa. I-alloy 8021 ingaqwalaselwa kuluhlu lwemilinganiselo emininzi ngokweemfuno zabathengi.
8021 Izinto zeAluminiyam: I-foil ye-aluminium engama-8021 ayibizi, yomelele, ayiyityhefu, kwaye ayithambisi. Ukongeza, iyachasa uhlaselo lweekhemikhali kwaye ibonelela ngombane ogqwesileyo kunye non-magnetic shielding. Ukubumba ifoyile ebandayo inokumelana ngokupheleleyo nomphunga, ioksijini ngokusebenza kakuhle kwesithintelo sevumba. I-8021 aluminium alloy iqinisekisa ukusebenza okungcono kwezicelo ezinje ngokupakisha amayeza, ukupakishwa kwe-elektroniki, iqokobhe lebhetri kunye nazo zonke ezifuna ukusebenza komqobo.
Ipakethi yebhetri ngefoyile ye-8021 yintsimbi eyenziweyo evela kwi-foil esisiseko sealuminium enezinto ezongezelelweyo. Ngokwesiqhelo phakathi kwe-0.035 kunye ne-0.06 mm ubukhulu, i-8021 aluminium foil iveliswa kububanzi obuninzi namandla.
Iifutha eziqhelekileyo ezisetyenzisiweyo ze-8021 aluminium foil zibandakanya i-H14, i-H18, i-H22, i-H24 kunye ne-O.
Egqithileyo Ngefoyile ye-aluminiyam
Okulandelayo: Inkqubo yokuhambisa inkqubo yokushushu